ခေါင်းကြီးသတင်း | Dwave | Page 2
Home သတင်းကဏ္ဍ ခေါင်းကြီးသတင်း
Posted By: D Waveon: October 16, 2017 In: သတင်းကဏ္ဍ, ခေါင်းကြီးသတင်းNo Comments
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူ ဒါန်းပွဲ အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဥပ္ပါတသန္တိစေတီတော် သာသနာ့မဟာဗိမာန်တော်၌ ကျင်းပရာ နိုင်ငံ...	Read more
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ကူညီမှုများ ထိထိရောက်ရောက် ပေးအပ်နိုင်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများချမှတ်
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုအောက်တိုဘာ၁၁ရက်မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန (NRPC) ၌ ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပု...	Read more
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဝင်များအား တွေ့ဆုံလမ်းညွှန်
Posted By: D Waveon: September 27, 2017 In: သတင်းကဏ္ဍ, ခေါင်းကြီးသတင်းNo Comments
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ အပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီဝင်များအား စက်တင်ဘာ၂၂ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ...	Read more
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ (၇၂) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ အထွေထွေမူဝါဒရေးရာ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောကြား
(၇၂)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ အထွေထွေမူဝါဒရေးရာ ဆွေးနွေးပွဲ ဒုတိယနေ့ကို စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်ရှိ အထွေထွေညီလာခံခန်းမ (General Assembly Hall...	Read more
ပြဿနာတစ်ခုကို နေရာဒေသတစ်ခုတည်း ကွက်၍မကြည့်ဘဲ ခြုံငုံစဉ်းစား၍ ပူးပေါင်းကူညီကြရန် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ တိုက်တွန်း
ရခိုင်ဒေသဖြစ်စဉ်အပါအ၀င် ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားရာ၌ ပြဿနာတစ်ခုကို နေရာဒေသတစ်ခုတည်းအား ကွက်၍ မကြည့်ဘဲ ခြုံငုံစဉ်းစား သုံးသပ်၍ နိုင်ငံတကာအနေဖြင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ...	Read more
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယလက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအားလက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန အရှေ့တောင်အာရှ ဆိုင်ရာ ဒုတိယလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး...	Read more
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Hon. Jose de Venecia, Jr.နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: D Waveon: September 12, 2017 In: သတင်းကဏ္ဍ, ခေါင်းကြီးသတင်းNo Comments
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Hon. Jose de Venecia အား စက်တင်ဘာ၈ရက် မွန်းလွဲ...	Read more
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စ ရတ်နိုအယ်လ်ပီမာဆူဒီနှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စ ရတ်နို အယ်လ် ပီ မာဆူဒီနှင့်အဖွဲ့အား စက်တင်ဘာ၎ရက်မွန...	Read more
မြန်မာ့အရေး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ရပ်တည်မှုအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောကြား
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသည့် အကြမ်းဖက်ခြိမ်းမှုများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ရင်ဆိုင်နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ခိုင်မာသည့် ရပ်တည်ချက်ကို ကေ...	Read more
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက်(ရန်ကုန်)တွင် လာရောက်လေ့လာသည့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ရှရီနာရန်ဒရာမိုဒီအား နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြိုဆို
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ချစ်ကြည်ရေး ခရီး ရောက်ရှိ နေသော အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ရှရီနာရန်ဒရာမိုဒီ ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်...	Read more